Gabdhaha reer Siiriya oo u dhaxeeya qax iyo guursi | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka December 16, 2016	0 337 Views
Jordan (Himilonews) – Gudaha xarun daryeelka hooyada oo ku dhex taal xero ay ku nool yihiin qaxooti Siiriyaan ah oo ku taal Jordan, Elham waxay dhabta ku heysataa cunugeeda 11-bilood jirka ah oo ooynaya – waxyar kadib markay aamusin kari waysana waxay u dhiibaysaa hooyadeed oo ag-fadhida si ay huuwaayeeso. “Markii aan wax dhalay, waxaan dareemay shucuur hooy0-nimo; waana farxay,” ayay ku tiri afka turjume ag-taagnaa. “Hadda waxaan ahay marwo xaas ah.” Elham waa 17-jir waaya’aragnimadeeduna waa mid guud oo ay la wadaagto gabdhaha kale ee reer Siiriya.
Previous: Hindiya oo baararka qamriga ee jidadka saaran mamnuucaysa
Next: Shisheeyaha guursanaya Sucuudiyaanka oo laga rabo inay maraan tijaabo adag oo caafimaad
Q1aad: Ereyo Jaceylka Xanbaarsan